सर्वाधिक उच्च बिन्दुमा कारोबार बन्द हुँदा किन भए यी कम्पनीका लगानीकर्ता निराश ? - Arthasansar
सर्वाधिक उच्च बिन्दुमा कारोबार बन्द हुँदा किन भए यी कम्पनीका लगानीकर्ता निराश ?
विहीबार, १६ पुस २०७७, १६ : १८ मा प्रकाशित
बिहिबार साताको कारोबारको अन्तिम दिन आज नेप्से सुचक २५ अंकले बढेको छ । यो संगै आज नेप्सेको कारोबार सर्बाधिक उच्च बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ ।
नेप्से सुचक २५ अंकले बढेर २०८७.२७ को बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्से दोहोरो अंकले बढ्दा पनि आज केहि कम्पनीका लगानीकर्ताहरु भने निरास हुन परेको छ ।
आज पनी सबै भन्दा बढि निराश नारायणी विकाश बैंकका लगानीकर्ताहरु हुनु परेको हो । आज बैंकको सेयर मूल्य ३.७८ प्रतिशतले घटेको हो ।
आज सेयर मूल्य घट्ने अन्य कम्पनीहरुमा आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स, कालिका लघुबित्त विकाश बैंक, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, नबिल व्यालेन्स फन्ड–२, माउन्टेन इनर्जी, शिवम् सिमेन्ट, मन्जुश्री फाइनान्स, कर्णाली विकाश बैंक र हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेका छन् ।